politika Fiarovana fiainan'olona | Data Recovery
Home → politika Fiarovana fiainan'olona
Recovery Data Services:
Ny tahirin-kevitra fanarenana laboratoara tontolo iainana dia azo antoka amin'ny angon-drakitra mpanjifa foana laboratoara manokana maso ny fidirana sy mba hahazoana antoka manam-pahaizana manokana ihany no mety hiatrika vaovao saro-pady. Fifanarahana tsy tapaka isika mba sitrana tsiambaratelo ny angon-drakitra ho an'ny governemanta, sampan-draharaha mpampihatra lalàna sy ny fikambanana tsy miankina. LC Teknolojia dia zatra ny haavon'ny fiainana manokana sy ny fiarovana izay mitaky fitaovana sokajiana. Ireo antontan-taratasy rehetra sitrana rehefa voafafa tanteraka 30 andro.
Zava-kendreny: LC Teknolojia International ny fiainana manokana fanambarana politika dia nosoratana ho toy ny mpitari-dalana ho amin'ny fampahalalana avy amin'ny mpampiasa no manangona sy ny fomba ampiasantsika izany vaovao. Mahatsapa izany isika dia hanome fahafahana azy ireo hanao ny nahita fianarana sy ny fanapahan-kevitra ny famatsian mampahazo aina vaovao ho antsika. Raha toa ka manana fanontaniana na olana ny soso-kevitrao Masìna ianao, aoka isika mahalala amin'ny Service@LC-Tech.com.
Mponina ankapobeny sy ny vaovao manokana no angatahinay
Iza no mizara vaovao amin'ny
Statistics Tracking: LC Technology miasa 4 Sites tanana, www.LC-Tech.com, www.LC-Tech.co.uk, www.FILERECOVERY.com ary www.PHOTORECOVERY.us Toerana rehetra manara-maso antontan'isa. Ny toerana fanaraha-maso Analytics mampiasa tolotra toy ny Google Analytics sy Bing Analytics.
Ireo antontan'isa hiteraka asa ho antsika toy ny pejy jerena, mandra-pahoviana izy ireo no jerena, ny fotoana sy ny fivoriana hafa antontan'isa. Io fanazavan io dia ampiasaina ihany ny fitantanana anatiny ny mpampiasa traikefa tsara kokoa.
Tsy hamoaka na ao ihany ny antontan'isa ho an'ny daholobe.
Mety, indraindray lisitra mpitsidika firy, na mamely ny toerana dia ampiasaina ao anatin'ny fotoana nomena fe-potoana, fa tsy misy vaovao mikasika ny tsirairay manokana ny adiresy IP Navoaka. Izany dia ampiasaina ho an'ny Mponina faritra ihany ary tsy voatahiry, na nizara.
Tsy amidy ny tahirin-kevitra na iza na iza — izany ihany no ampiasaina anatiny.
Cookies: Isika ihany no mampiasa mofomamy ao amin'ny e-varotra faritra ny toerana. Cookies dia ampiasaina mba haharaka ny lisitry ny hovidiana anatiny sy ny nividy fivoriana. Ny Cookies koa ampiasaina mba hanampiana amin'ny famenoana amin'ny teny avy hatrany. Ny Cookies Tsy misy vaovao sy mandefa faty afaka andro vitsivitsy.
Information mponina ankapobeny sy ny Tena Manokana Information no angatahinay: Mangataka izahay mombamomba amin'ny faritra maro ny tranonkala; rehefa Demos no alaina, dia nangataka vaovao, dia nividy entana, ny fanohanana ara-teknika dia nangataka na famandrihana ny ny gazetinay amin'ny mailaka dia nangataka. Miaraka amin'ny vaovao manokana, izahay koa dia mangataka fanazavana fototra mponina ankapobeny sy / na ny famaritana ny olana ianao manana. Lisitra mailaka rehetra dia hifidy-in sy ny mpampiasa dia afaka serasera amin'ny fotoana rehetra amin'ny fandefasana ny e-Mail to Unsubscribe@LC-Tech.com ho esorina avy hatrany.
Fomba ampiasantsika nanangona Information: Ny vaovao voaangona eo amin'ny tranonkala, na napetraky ny mpampiasa na ny antontan'isa nangonin'ny lohamilina dia ampiasaina in-trano fotsiny ho an'ny mponina ankapobeny fanadihadiana, vokatra fanatsarana sy ny mpampiasa kokoa traikefa. Isika no manana gazety isam-bolana izay hifidy-in amin'ny alalan'ny e-Mail. Tsy izahay na ny ampahany amin'ny spam e-Mail tolotra na ny dokam-barotra ary tsy isika no mivarotra na hizara ny lisitra akory antoko fahatelo olona na orinasa.
Foana isika rehetra hentitra tsiambaratelo vaovao.
Iza moa izahay Share Information Miaraka: Ny hany antoko fahatelo izay manana ny fahazoam-baovao momba ny mpanjifa no Voalohany Data Corporation alalan'ny F4 Gateway Global carte de crédit fikarakarana vavahady, miaraka amin'ny PayPal, Mivatra sy SanDisk® Corporation. Information dia naniraka tany amin'i F4 Global Gateway, PayPal na mivatra raha tsy rehefa misy mpanjifa manao fividianana ary mampiasa raharaham-barotra azo antoka vavahady. Voalohany Data Corporation (Gateway Global F4 ny Ray Aman-dreny Company) dia iray amin'ireo lehibe indrindra carte de crédit processors eo amin'izao tontolo izao, ary miasa ao amin'ny 34 firenena manerana izao tontolo izao. Azonao jerena ny vaovao Eto. Voalohany Data dia nanamarina am-bava izy, fa tsy mizara vaovao ary fa manohitra ny karatra politika issuers, izay tsy mamela azy ireo hizara izay vaovao billing. LC Teknolojia tsy afaka niverina misy politika amin'ny F4 Gateway Global na First Data. Information dia naniraka tany amin'i SanDisk® Corporation raha tsy rehefa misy mpanjifa efa nividy SanDisk® RescuePRO® mivantana avy www.LC-Tech.com. SanDisk® Corporation dia iray amin'ireo lehibe indrindra mpamokatra sy mpamatsy ny tselatra fitahirizana vokatra karatra ho an'ny isan-karazany ny vokatra elektronika sy ny fitaovana nomerika. LC Technology Iraisam-pirenena dia tsy afaka niverina misy politika amin'ny SanDisk® Corporation.
Inona no Rights anananao noho ny Data:
Raha toa ianao ka manana mpikambana nisoratra anarana, na ankavia fanehoan-kevitra eo amin'ny toerana dia afaka mangataka ny hahita na télécharger ny angon-drakitra ananantsika momba anao. Toy ny LC-Tech.com tsy mitondra fanehoan-kevitra, na manana mpampiasa voasoratra anarana, dia tsy manana vaovao avy izao ho vahiny ny Download. Ny hany fanazavana izahay manana no ho fanazavana namatsy avy amin'ny famenoana ny rindrambaiko tombana avy amin'ny teny fangatahana, ny fangatahana fanohanana teny, na ny fifandraisana teny.
Matetika ho an'ny mpitsidika izay nameno ny endrika, ny antontan-kevitra no ho adiresy mailaka, na ny adiresy IP voatendry ho azy ireo tamin'ny fotoana famenoana avy endrika sy ny mpandraharaha mpampiasa kofehy ny navigateur dia nampiasaina. Ny sisa amin'ny tahirin-kevitra dia besinimaro araka ny navoakan'ny ny mpitsidika.
Fa fandoavana ny mpanjifa, izany ihany koa dia ahitana fampahalalana ny mombamomba sy ny Download, fandoavam-bola, sy ny fanohanana tapakila tantara.
*** Azonao atao koa ny mangataka "ny hohadinoina" ary dia hamafa izay fantatra mihitsy isika angon-drakitra momba anao.
Mazava ho azy, navahan'i ity angon-drakitra ilaintsika panjakana, na tanjona, na fiarovana raha toa isika takian'ny lalàna mba hitana ny sasany tamin'ny tahirin-kevitra.
Na izany aza, raha toa ianao ka mandoa mpanjifa ny antsika, ary rindrambaiko manana fahazoan-dalana izay efa voasoratra ara-panjakana amintsika, raha hamafa anareo avy amin'ny banky angona, dia tsy ho afaka ny hijery anareo amin'ny banky angona mba ho afaka hanampy anao amin'ny fanohanana ara-teknika, fahazoan-dalana fanavaozana, na ny zavatra hafa. Noho izany, masìna ianao, hevero fa rehefa mangataka ianao famafana avy amin'ny banky angona.
Fa 'izao fotoana izao fe-potoana, izany mihatra ny mpitsidika avy any amin'ny Vondrona Eoropeana, araka ny General Data fiarovana Fitsipika (GDPR).
Fanampin'izany, tamin'ny Janoary 1, 2020, izany ihany koa ny vao mihatra navoaka California Consumer Privacy Act.
Dia ataovy tsara koa izany amin'ny hoavy tsy ho ela.
Ny olona iray izay mitady fahafahana miditra, na izay mikatsaka ny hanitsiana, ataovy tsara, na mamafa diso angona, dia tokony hitarika ny / ny fangatahanao ho support@lc-tech.com.
Dia hamaly ny antonony ao anatin'ny timeframe, not to exceed one week.
Fa 'izao fotoana izao fe-potoana, izany mihatra ny mpitsidika avy any amin'ny Vondrona Eoropeana, araka ny General Data fiarovana Fitsipika (GDPR), Ary raha Janoary 1, 2020, koa California mponina persuant ny California Consumer Privacy Act.
Inona no Data tapaka Fandidiana ananantsika ao amin'i Place:
Tokony Na ahoana na ahoana hitranga izay tahirin-kevitra mpanjifa no very, angalarina, na mety ho voatohintohina, ny politika dia ny hanairana ny mpanjifa amin'ny alalan'ny mailaka tsy taty aoriana noho ny 48 ora maro ny ekipa lasa mahafantatra ny hetsika. Izahay koa milaza zava-nitranga toy izany ny antontan-kevitra rehetra ilaina ny fiarovana ny fahefana. Dia miasa akaiky amin'ny mpanjifa rehetra voakasika mba hamaritana dingana manaraka toy ny hita lany-user fampahatsiahivana, sy ny fomba hisorohana ny zava-nitranga toy izany koa amin'ny ho avy.
Serivisy ho an'ny mpanjifa – Service@LC-Tech.com
hanafoana ny famandrihana – Unsubscribe@LC-Tech.com
FirstData Contact – Kitiho eto